छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साढे ३ करोड इनाम दिने एक धनाढ्यकाे घोषणा - Kavre Online
छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साढे ३ करोड इनाम दिने एक धनाढ्यकाे घोषणा
छोरीको बिहे गराउनका लागि थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले अनौठो घोषणा गरेका छन् । आफ्नी कन्याकुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई उनले उल्टै इनामस्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड (झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेका हुन्
उनकी छोरी कर्निता अहिले २६ वर्षकी भइन् । स्नातक तहसम्म पढेकी उनी चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्नमा सक्षम रहेको बताइएको छ । छोरीको बिहे हुन नसकेको चिन्ताले गर्दा ५८ वर्षका ती व्यापारी अर्नोनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले आफू एक कृषि फार्मकाे मालिक रहेको बताएका छन्
1,298 Post Views
Prevबल्छी धुर्वे दशैँमा ससुराली जाँदा यती दक्षिणा पाउँछन् ? बुढाबुढी मरिमरि हाँसे
Nextभर्खरै धादिङमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना भएपछि यस्तो छ अवस्था!
पत्थरीको अप्रेसनका लागि अस्पताल पुगेकी गुरूङको मृत्यु भएपछि ओम अस्पतालमा तनाव
यी तीन राशि हुनेले लगाउनु हुँदैन् सुन, जीवनलाई हुन्छ नोक्सान (5,954)